Jaaliyada Jarmalka oo aad uga xumaatey nin xaaskiisa ku diley - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Jaaliyada Jarmalka oo aad uga xumaatey nin xaaskiisa ku diley
Waxa shalay dalkaasi Jarmalka lagu diley hooyo Somaliyeed, waxayna ku baxday gacanta ninkii ay nolosha la wadaagaysay. Gacan ku dhiiglaha nolosha ka dhacay ayaa waxa gacanta ku dhigey booliiska dalkaasi Jarmalka. Hooyada la diley ayaa lagu magacaaba Layla Siciid waxayna ifka uga tagtey wiil laba jira oo ay u dhashay ninkale.
Gacan ku dhiiglaha oo lagu magacaabo Faarax Cali Muuse ayaa eheladiisu xaqiijeen inuu qabay laba bilood oo keliya isla markaana ayna muuqan wax dhibaato ah oo ay arkeen ama maqleen.
Layla aya ka mid ahayd qaxooti u Jarmalku ka soo qaaday Masar oo dib u dejin loo sameeyay. Booliska ayaa gacanta ku dhigay Ninka dilka gaystay waxaana socota baadhis dheeri ah oo ay ku baadhayaan Boolisku sida falku u dhacay iyo sababta dilka ka dambaysa.
Qaladka waxa iska leh dadka oo aan u sheegin gabadha nolosha dhabta ah ee ninkan oo sida muuqata aan ahayn qof fayoow. Waxa keliya ee hadda qaban karaan waa inay ilmahaas yar ee hooyadii lagu hordiley ay ka badbaadiyay gaalada.